"Joks fafaza" - umuthi elithatha umphumela isinqandakuvunda. Faka iphakethe liyadingeka abe "Joks spray. Imiyalo."
Isakhiwo kuhlanganisa izindlela allantoin futhi polyvidone-iodine. Iodine has a action ezinhle amagciwane futhi uvusa uketshezi excretory ka isikhwehlela amaseli, ngaleyo ndlela linikeze umphumela mucolytic, futhi izimpawu proteolytic, liveza okuncane immunostimulant umphumela.
Polyvidone kuyinto ekhuthaza macromolecular futhi wabasebenzisa njengezinceku isithwali ekulungiseleleni iodine "Joks Futha". Ukufundiswa kusho okwakubonisa ukuthi lo kwakwakhe kuyehla imiphumela anobuthi ku omzimba iodine. Lapho i-iodine ezikhishwe kunciphisa umsebenzi okhanda amanye amathuba enzyme capsid amagobolondo amagciwane amaprotheni uhlelo lokuziphindaphinda lenyama namagciwane okushintsha isakhiwo amaprotheni. Ukutholakala polyvidone endaweni ukulungiselela iodine inikeza Ukungena okusheshayo ku amaseli futhi kuvimbela lokuhlushwa eliphezulu isinqandakuvunda kumaseli ngemva kokuphathwa.
ziphephile Polyvidone-iodine umsebenzi amagciwane ngokumelene nezilwanyana ezincane ezifana: Sacchoromyces cerevisiae, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Streptococcus pyogenes Neisseria sicci, Enterobacter cloacae, Streptococcus faecalis, Proteus mirabillis, Staphylococcus epidermidis, Candida albicans. Ukulungiselela "Joks-spray" Umsebenzi elwa namagciwane izifo sibi zokuphefumula bebelokhu Bufinyelela shí izingqimba we epidermis nolwelwesi lwamafinyila. Inikeza nomphumela omuhle futhi esheshayo amafomu chronic acute lesi sifo. Kodwa ngaphambi kokufaka izindlela qiniseka ukuhlola ehlathini "Joks spray. Imiyalelo" ukugwema imiphumela emibi lezi zakhi ku umzimba ngamanye.
Ukulungiswa kuhlanganisa izidakamizwa ezifana allantonin okuyinto ine anti-inflammatory futhi reparative futhi ngaleyo ndlela ngcono ukusebenza polyvidone-iodine. Le into libhekene zabonakala zikwazi ukunqanda ukukhula webhaktheriya nokunciphisa mucosa eqabulayo cell ukuvuselelwa kanye ukudubula ukucasuka.
Polyvidone-iodine is kahle bumuncwa isikhumba umsulwa futhi nolwelwesi lwamafinyila lapho isicelo ihlelwe ngokulandelana kwezihloko. Nge Ukungena esiningi iodine umzimba ungakheka ukuphazamiseka tireoidalnoy umsebenzi. Iodine esemzimbeni atholakala is akheka ukuba iodide futhi avame ukunqwabelana kule ndlala yegilo. Umuthi is excreted kusuka emzimbeni by izinso, inani elincane umjuluko, indle, ngamathe. Iodides bathambekele zingene isithiyo gematoplatsentarny, bese excreted e ngobisi lwebele.
Yikuphi izifo kumele kusetshenziswe "Joks"? Yokusetshenziswa libhekisela izidakamizwa ngesikhathi lezi zifo ezilandelayo:
- namathansela (chronic acute);
- angina (lacunar, catarrhal, follicular);
- ukuvuvukala lwamafinyila ulwelwesi izinqubo (kuhlanganise ukuvuvukala sprue, ulimi, amalaka);
- izimpawu zomkhuhlane.
Indlela yokufaka isicelo "Joks Futha"? Yokusetshenziswa ekulungisweni simiswe ngalendlela lelandzelako: Joks spray isicelo, uma kunesidingo zonke 4 h. Ngokushesha ngaphambi kokuba ukusetshenziswa isivalo isuswe, ukubeka nokokuyifaka ocindezelwe izikhathi ezimbalwa ukuze agcwalise nokokuyifaka yaphinde yaphathwa kuya ngalo ingaphakathi ngomlomo, okwenza wokunisela.
Kusho "Joks" ngesimo isixazululo esetshenziselwa uhlambulule ukuba kwenziwe izikhathi ezingu-2 kuya ku-4 ngosuku.
Umuthi babekezelelwa kahle, futhi ukusabela kakhulu kuyaqabukela nomzimba (giperimiyu, urticaria, pruritus). ukusetshenziswa eside zomuthi ngokuvamile kubangela yodizma ukuthuthukiswa.
Umuthi is hhayi Kunconywa ukusetshenziswa ngesikhathi ukuzwela ephakeme ukuze yezingxenye aqukethe uhleloxhumano nomuthi, ukuhluleka kwenhliziyo, i-hyperthyroidism, esingamahlalakhona kwezinso, zokwelapha kanye izindlela zokuxilonga usebenzisa i-iodine enemisebe izinsuku ezingu-14, kanye nezingane iminyaka 6.
Overdosing akunakwenzeka Nokho, iziguli kaningi esekhala ukunambitheka metallic emlonyeni, isicanucanu, ukuhlanza, ukukhishwa isisu kanye yisisu. Ngemva ukusetshenziswa kwezidakamizwa izinsuku 3 laligujwa anuria, isifiso inyumoniya, edema, glottis.
Ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo "Joks fafaza" Qiniseka ukufunda imiyalelo.
Wamafutha "oxoline": yokusetshenziswa
Cyanosis blue wendabuko imithi
"Saridon": yokusetshenziswa. Ukubuyekeza, amanani, izinkomba
Futha "DELUFEN": yokusetshenziswa nempendulo. Yokusetshenziswa "DELUFEN" ezinganeni
Umuthi 'Teturam ": ukubuyekezwa kanye incazelo
Eye lehla "Taurine" - izici isicelo
Kungakhathaliseki ukuthi i-roentgen yezono zempumu iyadingeka yini?
Ukuzalwa Ukwakheka kusuka amaqabunga ekwindla
Lo mdlalo "Zombie Ipulazi": lapho sokumba isibani komhlaba?
Indlela hlola version of the BIOS?
Indlela ukwandisa isikhathi sokuya ocansini? Kancane mayelana nenkinga ezibalulekile
Ukuphenya komsindo. Memeza izingoma zokulinganisa
Ngifuna ukudla, yini okufanele uyenze? izixazululo amabili ngempumelelo
Analog "Linex" ezishibhile. Kuvele Analogue zomuthi "Linex": izibuyekezo odokotela
"Thermex" 50 amalitha (amanzi ashisayo). Uphenyo amanzi ashisayo "Thermex" amalitha angu-50
Sea yebhesi multivarka abazuzile nje epanini ukuthosa noma kuhhavini
Ukwelashwa nokuvikelwa amakhambi abantu ngoba sifo kahle elihlangene ne izindlela zokwelapha ezivamile